Blatter arrives in Zimbabwe - The San Diego Union-Tribune
FIFA President Sepp Blatter, right, is greeted by Zimbabwean President Robert Mugabe, during his visit to Zimbabwe, in Harare, Monday, July, 4, 2011. FIFA President Sepp Blatter arrived in Zimbabwe on a private jet Monday at the start of a two-day visit to meet administrators of the southern African nation's controversy-mired game. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhio) (/ AP)
FIFA President Sepp Blatter, right, is greeted by Zimbabwean President Robert Mugabe, during his visit to Zimbabwe, in Harare, Monday, July 4, 2011. FIFA President Sepp Blatter arrived in Zimbabwe on a private jet Monday at the start of a two-day visit to meet administrators of the southern African nation's controversy-mired game. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (/ AP)
FIFA President Sepp Blatter, left, greets children during his visit to the Zimbabwe Football Association Village in Mount Hampden about 40 kilometres west of Harare, Monday, July 4, 2011. FIFA President Sepp Blatter arrived in Zimbabwe on a private jet Monday at the start of a two-day visit to meet administrators of the southern African nation's controversy-mired game. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (/ AP)
FIFA President Sepp Blatter,centre, during his visit to the Zimbabwe Football Association Village, in Mount Hampden about 40 kilometres west of Harare, Monday, July 4, 2011. FIFA President Sepp Blatter arrived in Zimbabwe on a private jet Monday at the start of a two-day visit to meet administrators of the southern African nation's controversy-mired game. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (/ AP)
FIFA President Sepp Blatter, left, is greeted by Zimbabwean President Robert Mugabe, during his visit to Zimbabwe, in Harare, Monday, July 4, 2011. FIFA President Sepp Blatter arrived in Zimbabwe on a private jet Monday at the start of a two-day visit to meet administrators of the southern African nation's controversy-mired game. (AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi) (/ AP)